What If You Rre Sick During Pregnancy – My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
What If You Rre Sick During Pregnancy
မိခငျလောငျးတို့ရေ။ ဝမျးကွာတိုကျထဲက သားသားမီးမီးလေးတှကေို လှယျထားရတဲ့အခြိနျက ကိုးလဆယျလတောငျဆိုတော့ နှေ၊မိုး၊ဆောငျး ရာသီဥတုသုံးမြိုးလုံးကို ကိုယျဝနျလှယျရငျးဖွတျသနျးရတဲ့အခါ တဈခါတဈလေ ဖြားနာတတျကွတာပေါ့။ ဒီလိုဖြားနာခဲ့ရငျ အားလုံးမေးတတျကွတာက ဘာဆေးသောကျရမလဲ၊ ကိုယျဝနျနဲ့အဆငျပွပေါ့မလားဆိုတဲ့ မေးခှနျးပါပဲ။ ဒီတော့ဘယျဆေးတှကေ အန်တရာယျကငျးသလဲ၊ ဘယျဆေးကတော့မသောကျသငျ့ဘူးလဲဆိုတာ အဖွရှောကွညျ့ကွရအောငျနျော။
ကိုယျဝနျဆောငျစဉျဖြားနာရငျ စိတျအခရြဆုံးအဖြားကဆြေးကတော့ ပါရာစီတမော(Paracetamol)ပါပဲ။ အစီတာမိုငျနိုဖနျ(Acetaminophen) ဆိုတာကိုလဲကွားဖူးကွမယျထငျပါတယျ။ တကယျတော့ ပါရာစီတမောနဲ့ အစီတာမိုငျနိုဖနျဆိုတာအတူတူပါပဲ။ Paracetamol ကိုလကိုယျဝနျလနုလရငျ့မရှေး စိတျခစြှာသုံးနိုငျပါတယျ။ နိုငျငံတကာလလေ့ာဆနျးစဈခကျြတှအေရ ပါရစီတမောဟာ မိခငျအတှကျရောကလေးအတှကျပါ ထိခိုကျမှုမရှိဘူးလို့ အဖွတှေရှေိ့ထားပါတယျ။
ဒါဆို ပါရာစီတမော တဈမြိုးပဲသောကျရတော့မှာလား?
ပါရာစီတမောအပွငျ လူတှအေသုံးမြားတဲ့ဆေးတှကေတော့ Ibuprofen ၊ Mefenamic Acid နဲ့ Diclofenacတို့ပါပဲ။ ဒီဆေးတှကေ NSAID (Non Steroidal Anti Inflammatory Drugs) ဆိုတဲ့ဆေးအုပျစုဝငျတှဖွေဈပါတယျ။ Ibuprofenကိုတော့ သာမာနျဖြားနာကိုကျခဲရငျသုံးကွပွီး Diclofenacကိုတော့ ဖြားနာတာထကျ နာကငျြကိုကျခဲရငျပိုသုံးကွပါတယျ။ Mefenamic Acidကတော့ အမြိုးသမီးတှေ ရာသီသှေးဆငျးခွငျးကွောငျ့ကိုကျခဲရငျသုံးကွပါတယျ။ ဒီဆေးသုံးမြိုးလုံးကို သာမာနျအခြိနျမှာ အဖြားပြောကျဆေးအနနေဲ့လဲ သုံးနိုငျပါတယျ။ ကိုယျဝနျဆောငျစဉျကာလမှာတော့ ကိုယျဝနျလနုစဉျမှာ ဆရာဝနျညှနျကွားခကျြနဲ့သုံးနိုငျပမေယျ့ ကိုယျဝနျတတိယသုံးလပတျမှာတော့ ရမှောရညျနညျးခွငျး၊ ကလေးရဲ့နှလုံးသှေးလညျပတျမှုလမျးကွောငျးကို ထိခိုကျနိုငျခွငျးတို့ကွောငျ့ တားမွဈထားပါတယျ။ Aspirin( အကျစပရငျ) သညျလညျးထို့အတူပါပဲ။ ကိုယျဝနျတတိယသုံးလပတျမှာ အသုံးပွုမိရငျ မီးဖှားတဲ့အခါ မိခငျအတှကျသှေးဆုံးရှုံးမှုကို ပိုမြားစပွေီး ကလေးမှာလညျး Haemolytic Disease of Newbornလို့ချေါတဲ့ သှေးနီဥတှပေေါကျကှဲစတေဲ့ရောဂါရနိုငျပါတယျ။
ဒါကွောငျ့ ပါရာစီတမောသညျသာစိတျအခရြဆုံးလို့ပွောခငျြပါတယျ။ နှာစေးခြောငျးဆိုးပြောကျဆေးမြားကိုလညျး ဆရာဝနျညှနျကွားခကျြအတိုငျးသောကျသုံးနိုငျပါတယျ။
အခြို့သောဖြားနာခွငျးတှဟော ဘကျတီးရီးယားပိုးကွောငျ့ ဖွဈတတျတဲ့အတှကျ ပိုးသတျဆေးသောကျဖို့လိုအပျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ပိုးသတျဆေးတိုငျးဟာ အန်တရာယျကငျးတယျလို့တော့ ယူဆလို့မရပါဘူး။
ပငျနယျစလငျအုပျစုဝငျဖွဈတဲ့ အမောကျစီစလငျ(Amoxicillin) အစရှိတဲ့ပိုးသတျဆေးတှနေဲ့ Cephalosporinအုပျစုပိုးသတျဆေးတှဟော ကိုယျဝနျကိုမထိခိုကျနိုငျတဲ့အတှကျ ဆရာဝနျညှနျကွားမှုနဲ့အတူ သုံးစှဲနိုငျပါတယျ။ အခွားပိုးသတျဆေးတှအေနနေဲ့ Erythromycin ၊ Clindamycin တို့ကိုလဲသုံးနိုငျပါတယျ။
ကိုယျဝနျဆောငျစဉျမှာ မသုံးစှဲသငျ့သော လူသိမြားတဲ့ဆေးတှကေတော့
ငှကျဖြားပိုးသတျဆေးအခြို့ (Quinine ၊ Chloroquine)
Norfloxacin ၊ Cirofloxacin (စီဖရနျ) အစရှိတဲ့ Quinolone အုပျစုဝကျဆေးမြား
တီဘီရောဂါပိုးသတျဆေး Isoniazid ၊ Rifampicin (သတိပွုသုံးစှဲရနျ) တို့ပဲဖွဈပါတယျ။
ကဲ အခုလောကျဆို မိခငျလောငျးတို့ ဘယျဆေးတှကေို ရှေးခယျြသောကျသုံးသငျ့လဲ သိရပွီပေါ့နျော။
မိခင်လောင်းတို့ရေ။ ဝမ်းကြာတိုက်ထဲက သားသားမီးမီးလေးတွေကို လွယ်ထားရတဲ့အချိန်က ကိုးလဆယ်လတောင်ဆိုတော့ နွေ၊မိုး၊ဆောင်း ရာသီဥတုသုံးမျိုးလုံးကို ကိုယ်ဝန်လွယ်ရင်းဖြတ်သန်းရတဲ့အခါ တစ်ခါတစ်လေ ဖျားနာတတ်ကြတာပေါ့။ ဒီလိုဖျားနာခဲ့ရင် အားလုံးမေးတတ်ကြတာက ဘာဆေးသောက်ရမလဲ၊ ကိုယ်ဝန်နဲ့အဆင်ပြေပါ့မလားဆိုတဲ့ မေးခွန်းပါပဲ။ ဒီတော့ဘယ်ဆေးတွေက အန္တရာယ်ကင်းသလဲ၊ ဘယ်ဆေးကတော့မသောက်သင့်ဘူးလဲဆိုတာ အဖြေရှာကြည့်ကြရအောင်နော်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်ဖျားနာရင် စိတ်အချရဆုံးအဖျားကျဆေးကတော့ ပါရာစီတမော(Paracetamol)ပါပဲ။ အစီတာမိုင်နိုဖန်(Acetaminophen) ဆိုတာကိုလဲကြားဖူးကြမယ်ထင်ပါတယ်။ တကယ်တော့ ပါရာစီတမောနဲ့ အစီတာမိုင်နိုဖန်ဆိုတာအတူတူပါပဲ။ Paracetamol ကိုလကိုယ်ဝန်လနုလရင့်မရွေး စိတ်ချစွာသုံးနိုင်ပါတယ်။ နိုင်ငံတကာလေ့လာဆန်းစစ်ချက်တွေအရ ပါရစီတမောဟာ မိခင်အတွက်ရောကလေးအတွက်ပါ ထိခိုက်မှုမရှိဘူးလို့ အဖြေတွေ့ရှိထားပါတယ်။
ဒါဆို ပါရာစီတမော တစ်မျိုးပဲသောက်ရတော့မှာလား?
ပါရာစီတမောအပြင် လူတွေအသုံးများတဲ့ဆေးတွေကတော့ Ibuprofen ၊ Mefenamic Acid နဲ့ Diclofenacတို့ပါပဲ။ ဒီဆေးတွေက NSAID (Non Steroidal Anti Inflammatory Drugs) ဆိုတဲ့ဆေးအုပ်စုဝင်တွေဖြစ်ပါတယ်။ Ibuprofenကိုတော့ သာမာန်ဖျားနာကိုက်ခဲရင်သုံးကြပြီး Diclofenacကိုတော့ ဖျားနာတာထက် နာကျင်ကိုက်ခဲရင်ပိုသုံးကြပါတယ်။ Mefenamic Acidကတော့ အမျိုးသမီးတွေ ရာသီသွေးဆင်းခြင်းကြောင့်ကိုက်ခဲရင်သုံးကြပါတယ်။ ဒီဆေးသုံးမျိုးလုံးကို သာမာန်အချိန်မှာ အဖျားပျောက်ဆေးအနေနဲ့လဲ သုံးနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်ကာလမှာတော့ ကိုယ်ဝန်လနုစဉ်မှာ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်နဲ့သုံးနိုင်ပေမယ့် ကိုယ်ဝန်တတိယသုံးလပတ်မှာတော့ ရေမွှာရည်နည်းခြင်း၊ ကလေးရဲ့နှလုံးသွေးလည်ပတ်မှုလမ်းကြောင်းကို ထိခိုက်နိုင်ခြင်းတို့ကြောင့် တားမြစ်ထားပါတယ်။ Aspirin( အက်စပရင်) သည်လည်းထို့အတူပါပဲ။ ကိုယ်ဝန်တတိယသုံးလပတ်မှာ အသုံးပြုမိရင် မီးဖွားတဲ့အခါ မိခင်အတွက်သွေးဆုံးရှုံးမှုကို ပိုများစေပြီး ကလေးမှာလည်း Haemolytic Disease of Newbornလို့ခေါ်တဲ့ သွေးနီဥတွေပေါက်ကွဲစေတဲ့ရောဂါရနိုင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ပါရာစီတမောသည်သာစိတ်အချရဆုံးလို့ပြောချင်ပါတယ်။ နှာစေးချောင်းဆိုးပျောက်ဆေးများကိုလည်း ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်အတိုင်းသောက်သုံးနိုင်ပါတယ်။
အချို့သောဖျားနာခြင်းတွေဟာ ဘက်တီးရီးယားပိုးကြောင့် ဖြစ်တတ်တဲ့အတွက် ပိုးသတ်ဆေးသောက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ပိုးသတ်ဆေးတိုင်းဟာ အန္တရာယ်ကင်းတယ်လို့တော့ ယူဆလို့မရပါဘူး။
ပင်နယ်စလင်အုပ်စုဝင်ဖြစ်တဲ့ အမောက်စီစလင်(Amoxicillin) အစရှိတဲ့ပိုးသတ်ဆေးတွေနဲ့ Cephalosporinအုပ်စုပိုးသတ်ဆေးတွေဟာ ကိုယ်ဝန်ကိုမထိခိုက်နိုင်တဲ့အတွက် ဆရာဝန်ညွှန်ကြားမှုနဲ့အတူ သုံးစွဲနိုင်ပါတယ်။ အခြားပိုးသတ်ဆေးတွေအနေနဲ့ Erythromycin ၊ Clindamycin တို့ကိုလဲသုံးနိုင်ပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်မှာ မသုံးစွဲသင့်သော လူသိများတဲ့ဆေးတွေကတော့
ငှက်ဖျားပိုးသတ်ဆေးအချို့ (Quinine ၊ Chloroquine)
Norfloxacin ၊ Cirofloxacin (စီဖရန်) အစရှိတဲ့ Quinolone အုပ်စုဝက်ဆေးများ
တီဘီရောဂါပိုးသတ်ဆေး Isoniazid ၊ Rifampicin (သတိပြုသုံးစွဲရန်) တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ကဲ အခုလောက်ဆို မိခင်လောင်းတို့ ဘယ်ဆေးတွေကို ရွေးချယ်သောက်သုံးသင့်လဲ သိရပြီပေါ့နော်။
Factors controlling sexual desire in men